"Indawo yokuhlala ye-TOLOMEIS" - Sacile / PN - I-Airbnb
"Indawo yokuhlala ye-TOLOMEIS" - Sacile / PN
Sacile, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Paolo
U-Paolo uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
E-Sacile Splendid APARTMENT e-"Molino Sacilese", IZINYATHELO EZIMBILI (imizuzu engu-7) UKUSUKA ESIKHUNGO SOMLANDO wedolobha (Giardino della SERENISSIMA) itholakala ngaphambi kwesiteshi sikaloliwe. Amakamelo okulala amabili (i-1 double ne-1 iwele), igumbi lokugezela, indawo enkulu yokuhlala / yokuhlala, igumbi lokudlela, ikhishi elinetafula, amathalasi amabili.
Ifulethi litholakala esitezi sokuqala sesakhiwo esihle sokuhlala esibizwa nge- "Molino Sacilese". Isiteshi sesitimela siqhele ngamamitha angama-50.
Ngezinyawo kungenzeka ukufinyelela zonke izinkonzo zedolobha kanye nesikhungo somlando esiseduze nesibabazekayo.
Umlando, amasiko ngisho negama laleli dolobha kuxhumene nomfula: i-Livenza.
Ku-"Giardino della Serenissima" - njengoba kuchazwe emkhathini wayo waseVenetian - izakhiwo zihambisana ngokuvumelana: izigodlo ezinhle, ngokuvamile ngesitayela se-lagoon, zibonakala emanzini aluhlaza omfula.
Ungaphuthelwa i-Cathedral yase-San Nicolò, usanta wedolobha kanye nosanta wokuzulazula emfuleni, iBandla le-Madonna della Pietà kanye ne-Piazza del Popolo, elinganakiwe izakhiwo ezinhle ezine-arcade.
Izakhiwo eziningi zekhulu leshumi nesithupha ezenza i-Sacile ibe idolobha le-Renaissance ngokugqwesa: izibonelo ezinhle kakhulu yi-Municipal Loggia futhi ngaphezu kwayo yonke iRagazzoni Flangini Billia Palace.
Izindlu eziningi zinemihlobiso ye-Renaissance noma yesitayela se-Baroque, enomthelela ekwenzeni i-Sacile idolobha elijabulisayo lapho ulahleka khona, uwele amabhuloho kanye nemizila ukuze uthole imibono eyela ngasocansini ukuze uzimele.
Minyaka yonke, ngo-Agasti, idolobha liphila ngeSagra dei Osei yendabuko, omunye wemikhosi yakudala yase-Italy, ehlanganisa imakethe yezinyoni, imidlalo nemiqhudelwano yokucula yezinhlobo eziningi.
Umakhelwane unenzuzo yokuzola futhi awunazo izinkinga zokupaka izimoto ngoba zikhona nxazonke zesakhiwo nangaphakathi kwegceke le-complex futhi zikhululekile.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ungathembela kuMbumbi wakho oyohlala etholakala kuwe ukuze uthole iseluleko kanye/noma ulwazi.